စုတ်တံ - ဝီကီပီးဒီးယား
စုတ်တံသည် ပန်းချီကားများ ရေးဆွဲရန်၊ တိုက်တာအဆောက်အဦများ ဆေးရောင်ချယ်ရန်၊ မျက်နှာအလှပြုပြင်ချယ်သရန် အတွက် အသုံးပြုကြသည်။
စုတ်​တံ(paint brushes) များ၏ စုတ်​တံ အ​မွှေး/မျှဉ်​ တို့ကို အ​ခြေခံပုံစံ နှစ်​မျိုးဖြင့် ပြုလုပ်​ထားကြသည်​။
သဘာဝသား​မွှေးများ( Natural hairs)
ခေါ် တိရစ္ဆာန်​ များ၏ သား​မွှေးများ။
လူတို့ပြုလုပ်​ထားသည့် Synthetic Fiber မျဉ်​များဖြစ်​ကြသည်​။
၁ သဘာဝသား​မွှေးများ (Natural hairs)
၂ လူတို့ပြုလုပ်​ထားသည့် (Synthetic fiber) မျဉ်များ
၃ watercolor brushes Types ​ခေါ် Shape များ
၄ ​ရေ​ဆေးစုတ်​တံ အ​ကောင်းစား တံဆိပ် ​(Brands) များ
သဘာဝသား​မွှေးများ (Natural hairs)[ပြင်ဆင်ရန်]
Badger Hair (​ခွေးတူဝက်တူ) အ​မွှေး
Hog (ဝက်​ထီး အ​မွှေး)
Camel Hair (ကုလားအုတ်​ ​မွှေး)
Kevrin/ Mongoose Hair (​မြွေပါ ​မွှေး)
Ox hair (နွားထီး၏ အ​မွှေး)
Pony hair ( မြင်းပု )
Goat hair (​ဆိတ်​ ​မွှေး)
Squirrel hair (ရှဉ့်မွှေး)
Sabeline ( နွားထီး၏ အ​မွေးအ​ရောင်​ ဖျော့ကို အနီဖြစ်​​အောင်​ ​ဆေးဆိုးထားခြင်း။)
Kolinsky Sable ( အနီ​ဖျော့ )
မြွေပါ မျိုးစိတ်​(weasel)တိရ စ္ဆာန်​၏အမြီး ​မှရသည့်အ​မွှေး)
Red sable ( Red hair )အနီ​ရောင်​ရှိ​သော​မြွေပါ မျိုးစိတ် (Weasel) တိရ စ္ဆာန်​၏ အ​မွှေး)
မှတ်​ချက်​။ ...kolinsky sable ကို Red sable သို့မဟုတ်​ Sable hair အဖြစ်​သိထားကြသည်​။
Watercolor အတွက်​ အရည်​အ​သွေး အ​ကောင်းဆုံးနှင့် ​ဈေးကြီးသည့် စုတ်​တံများမှာ Sable hair brushes များဖြစ်​သည်​။ ထို့ပြင်​ soft synthetic brushes များသည်​လည်း Sable hairs brushes ကဲ့သို့ watercolor ​ရေးရန်​ ​ကောင်းမွန်​​ပေသည်​။
လူတို့ပြုလုပ်​ထားသည့် (Synthetic fiber) မျဉ်များ[ပြင်ဆင်ရန်]
Nylon (နိုင်​လွန်​)၊ polyester (ပိုလီစတား) တို့ဖြစ်​သည်​။ ထို့​ကြောင့် Synthetic brushes များကို Nylon သို့မဟုတ်​ polyester သို့မဟုတ်​ ၎င်း နှစ်​မျိုးတို့ဖြင့် ပေါင်းစပ်​ ထုတ်​လုပ်​ထားကြသည်​။
Acrylic အတွက်​အ​ကောင်းဆုံး စုတ်​တံများမှာ Synthetic brushes များဖြစ်​ကြသည်​။ ၎င်း synthetic brushes များသည်​ ဈေးနှုန်းလည်း သက်​သာသည်​။
ဆီ​ဆေး(oil) အတွက်​ အ​ကောင်းဆုံးစုတ်​တံများမှာ ...
Natural Hog hairs စုတ်​တံများနှင့်
Sable hairs brushes များဖြစ်​သည်​။
watercolor brushes Types ​ခေါ် Shape များ[ပြင်ဆင်ရန်]
အဓိက (4) မျိုးသာရှိသည်​။
Flat Shape သည်​ ​အောက်​ပါ(3)မျိုး ထပ်​မံ ကွဲပြားသွားသည်​။
Wash Brushes နှစ်​မျိုးမှာ
Mop (Round) တို့ဖြစ်​သည်​။
Detail (အ​သေးစိတ်​) brushes များမှာ
​ရေ​ဆေးစုတ်​တံ အ​ကောင်းစား တံဆိပ် ​(Brands) များ[ပြင်ဆင်ရန်]
Winsor & Newton Series7Kolinsky Sable brushes.
Raphael ,Kolinsky sable brushes Fine point round brush.
Da Vinci Maestro ,series 35, Kolinsky sable brush for Watercolor.
Silver Brush black, Velvet watercolor brush set.
Robert Simmons , White sable brush pack
ထို့ပြင် acrylic painting ​ရေးဘို့ စုတ်​တံ​ရွေးချယ်​ရာတွင်​ ဆီ​ဆေးသမားများသုံးသည့် တောင့်တင်းခိုင်​မာပြီး ထိုးထိုး​ထောင်​​ထောင်အ​မွှေးရှိ ​သော စုတ်​တံများ( Stiff bristles) ကို အသုံးပြုနိုင်​​သလို ​ရေ​ဆေးပန်းချီကား​ရေးဆွဲရန် ထုတ်​လုပ်​ထားသည့် Synthetic brushes များကို သုံးနိုင်​​သည်​။
သို့​သော်​လည်း acrylic paint ​ဆေးသားသည်​ ဆီဆေးထက်​ ပိုမို ​ပျော့​ပျောင်း​ပြီး​ရေ​ဆေး (paint)ထက်​ ​ဆေးသားထူပြစ်​သည်​။ ထို့​ကြောင့် Acrylic စုတ်​တံသည်​ ဆိီ​ဆေးစုတ်​တံ​လောက်​ မာ​ကြော​နေစရာ မလိုပဲ၊ ရေဆေးစုတ်​တံထက် ​တော့ အ​မွှေး ပိုမို ​တောင့် တင်းသင့်​ပေသည်​။ တနည်းအားဖြင့် ​ရေ​​ဆေးစုတ်​နှင့် ဆီ​ဆေးစုတ်​တံ တို့အ​နေအထား၏ အကြား (အလယ်​အလတ်​)မှာရှိရ​ပေမည်​။
အရည်​အ​သွေးမှီ​သော ၊​ကောင်းမွန်​​သော စုတ်​တံများသည်​ ပန်းချီကား​ကောင်းများဖြစ်​​ပေါ် စေနိုင်​သဖြင့် စုတ်​တံများသည်​ ပန်​းချီ​ရေးဆွဲရာတွင်​ လိုအပ်​​သော အသုံးအ​ဆောင်​ပစ္စည်းများထဲ၌ အ​ရေးကြီးဆုံးအပိုင်းမှ ပါဝင်​​နေသည်​။ ထို့​ပြင်​ မည်​မျှပင်​ ကျွမ်းကျင်​​သော ပန်းချီဆရာ ဖြစ်​ပါ​စေ အသုံးပြု​သော စုတ်​တံ မ​ကောင်းမွန်​ပါက ပန်းချီကား​ရေးဆွဲရာတွင်​ အခက်​အခဲများနှင့် ရင်​ဆိုင်​ရပါလိမ့်မည်​။
ကောင်းမွန်​​သော ဆီ​ဆေးစုတ်​တံ တစ်​​ချောင်းသည်​ စုတ်​​မွေးတွင်​ ​ဆေးကိုသယ်​​ဆောင်​ထားစဉ်​နှင့် ​စုတ်​ချက်​ ​ရေးဆွဲပြီးတိုင်း ပြန်​လည်​ရုန်းကန်​၍ သူ၏ နဂိုမူလ စုတ်​​မွေး (shape) ပုံစံအတိုင်း ပြန်​လည်​တည်​ရှိ​နေ​ပေမည်​။ ဆိုလိုသည်​မှာ စုတ်​တံတွင်​ဆေးရှိစဉ်​နှင့် ​ရေးဆွဲပြီးတိုင်း စုတ်​တံ အ​မွှေးပုံစံ မ​ပြောင်းလဲ​ပေ။
ညံ့သည့်စုတ်​တံမှာ​တော့ ​ဆေးသယ်​​ဆောင်​ထားစဉ်​နှင့် ​ရေးပြီးတိုင်း သူ၏ နဂို စုတ်​တံ​မွှေးပုံစံကို မရရှိနိုင်​​ပေ။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=စုတ်တံ&oldid=719682" မှ ရယူရန်
ဤစာမျက်နှာကို ၁၄ နိုဝင်ဘာ ၂၀၂၁၊ ၀၃:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။